Alibhaniya - ALinks
Ungasifaka njani isicelo se-visa eAlbania?
January 10, 2022 IShubham Sharma Alibhaniya, ivisa
"Isicelo seVisa" yinkonzo ye-elektroniki. Oko kuvumela abantu bamanye amazwe ukuba benze izicelo zokundwendwela. Kwaye kufuneka i-visa ifumaneke kwi-Embassy okanye kwi-Consulate. Emva kokuba zonke iinkqubo zokuqinisekisa zenziwe, isicelo
Ngawaphi amazwe angenayo i-visa kubemi baseAlbania?
January 9, 2022 UMaitri Jha Alibhaniya, ivisa
NgokweSalathiso sePasipoti yokuSekwa ​​kwePasipoti, ipasipoti yaseAlbania ikwindawo ye-52. Ivumela abemi bamazwe ali-115 ukuba bahambe ngaphandle kwevisa. Ngokubanzi, ifumana inqanaba lokuhamba eliphakathi. Abapasipoti baseAlbania banokuya kumazwe kubandakanya
Visa kumazwe asimahla eAlbania
Oktobha 20, 2021 IShubham Sharma Alibhaniya, ivisa
Ungayifumana njani iVisa yaseCanada evela eAlbania?
Oktobha 8, 2021 UAntika Kumari Alibhaniya, ivisa
Ukuba ungomnye wamanani akhulayo aseAlbania acinga ngokufudukela eCanada, ukukhetha i-visa efanelekileyo kuya kukunceda ukhawulezise inkqubo kwaye wandise amathuba okuphumelela. Ukuhlala ngokusisigxina eCanada kunokwenzeka ngeendlela ezahlukeneyo
Ufumana njani umsebenzi eKruja?
Septemba 7, 2021 UMaitri Jha Alibhaniya, imisebenzi
Ufumana njani umsebenzi eKruja? Ukufika kade kweAlbania kwezoqoqosho kwintengiso yasimahla kubangele ukwanda kokuvuleka kwemisebenzi eKruja. Ngenxa yokwanda kwenani lotyalomali lwangaphandle elizweni, amashishini amaninzi ayanda ngokukhawuleza.
Ufumana njani umsebenzi kwiLin?
Septemba 7, 2021 UMaitri Jha Alibhaniya, imisebenzi, Lin
Ukufika kade kweAlbania kwezoqoqosho kwintengiso yasimahla kubangele ukwanda kokuvuleka kwemisebenzi eLin. Ngenxa yokwanda kwenani lotyalomali lwangaphandle elizweni, amashishini amaninzi ayanda ngokukhawuleza. ILin yilali eku
Uyivula njani iakhawunti yebhanki eKsamil?
Septemba 6, 2021 UMaitri Jha Alibhaniya, iibhanki, imali
Uyivula njani iakhawunti yebhanki eKsamil, Albania? Ukuvula iakhawunti entsha yebhanki kwisixeko / kwilizwe elitsha umntu kufuneka ajongane nemiceli mngeni emininzi. Ke, ukuba uya eAlbania kwaye ufuna ukuvula iakhawunti yebhanki
Uyivula njani iakhawunti yebhanki eAlbania?
Uyivula njani iakhawunti yebhanki eAlbania? Ukuvula iakhawunti entsha yebhanki kwisixeko / kwilizwe elitsha umntu kufuneka ajongane nemiceli mngeni emininzi. Ke, ukuba uya eAlbania kwaye ufuna ukuvula iakhawunti yebhanki eAlbania